Barcelona Oo Xoojisay Doonisteeda Xiddiga Juventus Ee Miralem Pjanic, Shan Ciyaartoy Oo Ay U Bandhigtay & Haddii Arthur Ku Qasbi Doonto Turin - Gool24.Net
Barcelona Oo Xoojisay Doonisteeda Xiddiga Juventus Ee Miralem Pjanic, Shan Ciyaartoy Oo Ay U Bandhigtay & Haddii Arthur Ku Qasbi Doonto Turin
Wada-xaajoodka u dhexeeya Barcelona iyo Juventus ee ku aaddan sidii ay ula kala wareegi lahaayeen laacibka khadka dhexe ee Miralem Pjanic ayaa sii socda, waxaanay kooxda reer Catalonia isku dayaysaa in ay hesho xal suurtogelinaya in heshiis ay labada dhinac gaadhaan.
Barcelona ayaa doonaysa in Miralem Pjanic uu xili ciyaareedka dambe ka mid noqdo laacibiinta ay ku dagaal-gelayso, waxaase qorshaheeda xakamaynaya in aanay rabin inay lacag kaash ah u shubto Juventus ee ay ciyaartooyo isku beddeshaan.
Sida uu qoray wargeyska Maca ee kasoo baxa waddanka Spain, Barcelona ayaa waxay u bandhigtay Juventus inay kala doorato shan ciyaartoy oo ka tirsan kooxdeeda oo u dhigma Miralem Pjanic, waxaana ugu horreeya kubbad-sameeyaha reer Brazil ee Arthur oo hore loogu amaanay inuu leeyahay qaab-ciyaareed ku habboon Barcelona oo kubbad isku-dhiib iyo kalsooni badan oo uu ku ilaashado kubbadiisaba leh.
Arthur ayaa la sheegay inuu diiddan yahay inuu tago Juventus oo iyaduna u arkaysa laacibka ugu mudan ee ay ku kala beddelan karaan Pjanic, hase yeeshee wararka laga helayo Barcelona ayaa waxay sheegayaan in kooxda reer Spain aanay laacibkeedan ku qasbi doonin inuu Juventus u wareego oo uu heshiiska qayb ka noqdo.
Difaaca reer Portugal ee Nelson Semedo ayaa isaguna ka mid ah ciyaartoyda Barcelona ay u bandhigayso Juventus oo iyadana la rumaysan yahay inay danaynayso inay iska xoojiso khadka daafaca.
Ivan Rakitic oo heshiiskiisa Barcelona uu sannad kali ahi ka hadhay ayaa liiska kusoo baxay, waxaana ku weheliya Arturo Vidal iyo difaaca Jean-Clair Todibo oo amaah ugu maqan kooxda reer Germany ee Schalke 04.
Dhinaca kale, haddii Todibo uu tago Turin, waxay Juventus ogolaan doontaa inuu iska tago difaaceeda Daniele Rugani oo isagana ay suurtogal tahay inuu yimaaddo Barcelona.